Ngaphandle kwendima ebonakalayo yokubamba inkukhu, inkqubo yamathambo inemisebenzi emibini eyongezelelweyo ebalulekileyo: ukugcina ikhalsiyam, kwaye uyakholelwa okanye hayi, ukuphefumla!
Iindidi ezimbini zamathambo zenza inkqubo yamathambo entaka:
Umoya: La mathambo (yithi: intsha- matic ) ziyimingxunya kwaye ziqhagamshelwe kwinkqubo yokuphefumla ngeengxowa zomoya. Imizekelo yamathambo e-pneumatic lukakayi, ithambo lekhola (i-clavicle), i-pelvis, kunye namathambo omqolo ongezantsi.
Umdibaniso: La mathambo, kubandakanya amathambo emilenze, iimbambo, kunye namagxa egxalaba, asebenza njengomthombo wecalcium egciniweyo ukuze isikhukukazi sicofe senze amaqokobhe amaqanda omeleleyo. Umongo wethambo ugcwalisa amaziko amathambo e-medullary enza iiseli ezibomvu nezimhlophe zegazi.
Inani lezinto eziqinisekisiweyo emathanjeni zixhasa amaphiko kwaye zivumela ukubhabha. Amathambo omqolo kwisifuba afityaniswe kunye, kwaye iimbambo ziyagqagqana, zisenza intambo yomeleleyo kwaye iqinile. I-keel ibonelela ngendawo enkulu yomphezulu ukuze izihlunu zamaphiko zincamathele.
Nangona amathambo enkukhu abonisa ubuchule bokubhabha obuphambili, izihlunu zenkukhu zibalisa ibali elahlukileyo - iinkukhu zihamba bhetele kuneeflaya.
Inyama yebisi yenkukhu imhlophe, kuba uninzi lweeseli zemisipha kukho uhlobo olunqunyulweyo lokwenza imisebenzi emifutshane, hayi iindiza ezinde. Uhlobo oluphambili lweeseli zemisipha kwinyama emnyama yemilenze kunye namathanga yenzelwe umzamo ozinzileyo, njengokuhambahamba. Ezinye iintlobo zeentaka ezingcono kuneeflaya kuneenkukhu zinenyama yonke emnyama.
isetyenziselwa ntoni imylanta
ukuseta njani umshicileli
uninzi lwamayeza amayeza aqhelekileyo abiza kakhulu
lever 2000 iisepha zokulwa neentsholongwane